Jibriil mise Juuni dollar ah ! [Qormo kooban] - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay’adda Cilmi-baarisa iyo wadatashiga ee CRD, wuxuu ka mid yahay musharrixiinta
u taagan xilka Madaxweynenimada Soomaaliya. Haddaba dad badan ayaa waxay isweydiin karaan waa kuma Jibriil Ibraahim Cabdulle?
Waa aqoonyahan edeb badan, qunyar socod ah, kana tirsan bulshada rayidka ah , raadadkiisa wax qabadna dadka badankiis arkaan waana tan ay ugu riyaaqeen hamhamta musharraxnimadiisa aan weli la shaacin.
Inta iiga aqoon badani waxa ay ku sifeeyaan Md Jibril Macallin Ibrahim Abdulle shaqsi karti badan, Leh mawhiba hogaamineed , Hadal yaqaan taxadar badan, Geesi ku fiican Go’aan qaadashada, Galaangal u leh qeybaha kala duwan ee Mujtamaca , Khibrad iyo waaya aragnimo ku filan u leh la tacaalidda mushkiladaha ku gaamuray dalka iyo dadka Somaliyeed, Ballamada ku fiican oo aan Ballan-fur aqoonin, Cilaaqaadkiiisa dibadeedna waa mid lagu cowryo!!
In badan oo aan la sheekeystay waxa ay ii muujiyeen in la joogo xilligii Md Jibriil iyo kuwa la jaadka ah ee maskax- maalka ehi hogaanka talada loo igman lahaa .
Lkn waxa ay shakki ka muujiyeen dhaqammada sanadahaan ee jawaanada dollarka ah Lagu xaraashayo duqowda, d’ayarta iyo qeybaha kale ee bulshada taas oo loo arko caqabada ugu adag ee horgudban soo ifbixidda kaaha kawaadir wax ku ool ah oo dalka ka saarta silica iyo saxariirta siyaasadeed, dhaqaale , dhaqan iyo diimeed.
Qalinkii: Wariye Cabdullaahi Khadar